Ny Xiaomi Black Shark 2 dia mandalo AnTuTu ary manoratra isa maherin'ny 430K | Androidsis
Ny Xiaomi Black Shark 2 dia mandalo AnTuTu ary manoratra isa maherin'ny 430K
Xiaomi dia manomana fitaovana vaovao, iray izay efa nandrasana ary toa hamely ny tsena tsy ho ela. Miresaka momba izany isika Black Shark 2, fantatra ihany koa Skywalker antsantsa mainty, araky ny fivoahana sasany izay efa nitety tranonkala.
Amin'ity indray mitoraka ity, ny smartphone lalao fahombiazana avo lenta dia nandalo ny mari-pahaizana AnTuTu ary nanoratra isa mihoatra ny 430 tamin'ny fitsapana, izay mametraka azy ny finday avo lenta mahery indrindra rehetra, mihoatra ny haingam-pandeha hafa sy haingan'ny orinasa hafa.
Ny valin'ny benchmark AnTuTu dia manamarina ny anarana marika Black Shark 2 ho "Skywalker", araka ny nambaran'ny valin'ny Geekbench ihany koa. Ny isa ankapobeny dia 430,882 isa, fitsambikinana lehibe avy amin'ireo isa 359,973 tamin'ny valiny voalohany teo amin'ilay sehatra fitsapana iray ihany.
Isa vaovao AnTuTu ho an'ny Xiaomi Black Shark 2
Mizara efatra ny isa: isa CPU tamin'ny isa 128,597, isa GPU 157,094 isa, isa UX 130,837 isa, ary isa fitadidiana 143,54.
Ny Black Shark 2 dia havoaka amin'ny 18 martsa ary ho tafiditra ao anatin'izany ny rafitra fanatsarana fanatsarana antsoina hoe Liquid Cooling 3.0 ary koa fakan-tsary miverina aoriana. Manantena izahay fa ny sasany amin'ireo endri-javatra teo alohany dia hanao fiverenana ihany koa, toy ny LED azo ovaina ao ambadika ary ny fanohanana ireo peripheral gaming azo ampidirina.
Ny terminal koa ho tonga fitaovana miaraka amin'ny processeur Snapdragon 855 nataon'i QualcommEny, tsy ho an'ny ambany izany. Ny isa azo tao amin'ny AnTuTu dia tsy mendrika SoC fampisehoana ambany. Ho setrin'izany, antenaina hivoaka amin'ny kinova samihafa izy, izay hiovaova ny fahaizan'ny RAM sy ny ROM. Hiatrika telefaona misy RAM 10 GB izahay amin'ny fampisehoana antonony. Na izany aza, mbola hita ihany izany rehetra izany. Kely sisa tavela ho an'i Xiaomi hametraka azy amin'ny fomba ofisialy miaraka amin'ny antsipiriany rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Xiaomi Black Shark 2 dia mandalo AnTuTu ary manoratra isa maherin'ny 430K
Fortnite dia manampy fiara vaovao sy sary mihetsika vaovao amin'ny fanavaozana farany